Carruurta la il-daran cudurrada Jadeecada iyo shubanka oo ku soo badanaya isbitaalka guud ee Garoowe. – Radio Daljir
Garowe, July 14 – Carruurta aadka u da’da yar ee qaba xannuunada jadeecada iyo shubanka ayaa kusoo badanaya isbitaalka guud ee magaalada Garoowe, sidaas waxaa Radio Daljir u xaqiijiyey Dr. Cabdi Raxmaan Xusseen Xasan oo madax ka ah qeybta bukaan socodka ee isbitaalka.
Dr. Cabdiraxmaan ayaa wareysi gaar ah oo uu maanta siiyey Radio Daljir uga war-bixiyey cudurkii ugu badnaa ee laga helay bukaanada carruurta ah ee la jiifiyey isbitaalka sannadkaan 2011-ka, kuwaasi oo uu sheegay in uu ahaayeen cudurka Jadeecada, wuxuu kaloo sheegay in labadii bilood ee ugu dambeeyena uu ku soo darsamey cudurka shuban-biyoodka.
Mar aan su’aalo ka weydiiney Dr. Cabadiraxmaan Xusseen Xassan, sababaha keena cudurrada shubanka iyo jadeecada ayuu sheegey in ay ka kacaan nadaafad xumida iyo weliba carruurta oo aan la tallaalin, Isagoo ku baaqay in xil-weyn la iska saaro nadaafadda qoyska iyo tallaalka carruurta.
Si kastaba ha’ahaatee sannadkaan 2011-ka ayaa isbitaalka guud ee magaalada Garoowe waxaa ku soo badanayey bukaannada carruureed ee la il-daran cudurrada Jadeecada iyo shuban-biyoodka , kuwaasi oo laga kala keeno degmooyinka iyo dhulka miyiga ah ee gobolka Nugaal.